Isiphepho uLornzo: izici, imvelaphi nokuguquka kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
El Isiphepho uLorenzo kwenzeka ngoSepthemba 2019 futhi wawutholakala kuma-degree angama-45 entshonalanga. Kuthinta izingqimba ezisentshonalanga enkulu yeYurophu emzileni ophela esiqongweni esisenyakatho seBritish Isles. Bekuyisiphepho esishaye kakhulu ukubona ukuthi singesinye sezimo zokuqala ezinje kule ngxenye yomhlaba. Kuyisiphepho esinamandla kakhulu ukuvela eduze kwaseSpain inqobo nje uma sinamarekhodi.
Ngalesi sizathu, sizonikezela le ndatshana ukufingqa zonke izici zeSiphepho uLorenzo futhi uma sizophinde sikubone, lokhu kuzokwenzeka ngokuzayo.
1 Ukuguquka kwesimo sezulu kanye neziphepho
2 Izici Zesiphepho uLorenzo
3 Isiphepho uLorenzo endaweni yaseSpain
4 Ingabe kuzophinda kwenzeke?
Ukuguquka kwesimo sezulu kanye neziphepho
Siyazi ukuthi imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu ingukukwanda kokuvama nokuqina kwemicimbi yezulu eyeqile njengesomiso nezikhukhula. Kulokhu, lokho okuthinta kakhulu ukwenziwa kweziphepho kuhlobene ukukhuphuka kwamazinga okushisa emhlabeni jikelele. Kumele kubhekwe ukuthi amandla okwakheka kwesiphepho ahlobene nenani lamanzi elihwamuka liye emkhathini kanye nomehluko phakathi kwamanzi olwandle ahlukile. Lokhu kusho ukuthi ezindaweni lapho amanzi amaningi ehwamuka khona, izimvula ezinkulu zigcina selokhu wonke la manzi agcina encinana futhi akha amafu emvula amakhulu.
Ngokwanda kwamazinga okushisa emhlabeni jikelele, sizoba noshintsho kumandla womkhathi. Izindawo lapho kwakubanda khona phambilini, zizoshisa, ngakho-ke, sizoba nezinga eliphezulu lokuhwamuka. ISiphepho uLorenzo sabhekisa amabombo eYurophu futhi, njengoba sasinyakaza sisenyakatho-mpumalanga, saqoqa amandla okuba yisiphepho seSigaba 5. Lesi isigaba esiphakeme kunazo zonke esikalini sikaSaffir-Simpson. Kwaqhathaniswa nesiphepho esibi uKatrina esahlasela eNew Orleans ngo-2005..
Izici Zesiphepho uLorenzo
Ayigcini ngokuqhathaniswa neSiphepho uKatrina ngamandla, kepha nasendaweni lapho ihlasela khona. Lo mkhuba othize kule ndawo yase-Atlantic kungokokuqala ukuthi ubhalwe. Ngokwakho konke ukukala kwezikhungo nochwepheshe, indlela yeSiphepho uLorenzo yenza umthelela ezwenikazi laba lula, futhi inkinga enkulu yayise-Azores. Wafika kule ndawo njengoba imimoya ka-160 km / h nemimoya engaphezu kuka-200, kwamanye amaphuzu. Ngesikhathi ifika eBritish Isles yayivele isibuthaka kangangokuba yayingathathwa njengesiphepho.
Lapho isivunguvungu senziwa olwandle, sondla emanzini ahwamukayo afike phezulu lapho efika ogwini. Kodwa-ke, uma ingena ezwenikazi, iba buthakathaka futhi iphelelwe ngamandla njengoba ingena. Lokhu kwenza iziphepho zisatshwe kakhulu ezindaweni ezisogwini kunezindawo eziphakathi nezwe. Ukuqhubekela phambili kwezwe endaweni, kulondolozwa ngokwengeziwe kusuka kuziphepho.
Isiphepho uLorenzo endaweni yaseSpain
Kuyaqabukela kakhulu ukubona isiphepho endaweni efana neyethu. Impendulo yokuqala enikezwe lolu hlobo lokungabaza icacile. Into egqame kakhulu ukulandela umkhondo nesigaba salesi siphepho, kepha izivunguvungu ziqala ukwakheka kwazo e-Afrika. Kulapha lapho kwenziwa khona amagagasi okuphazamiseka abangela ukungazinzi futhi okuhudulwayo. Lapho lokhu kungafinyeleli kufinyelela olwandle olufudumele eCaribbean, baba yiziphepho zakudala nezinamandla esivame ukuzibona.
Into yokuthi lesi sikhathi ayikafiki eCaribbean kusukela lapho uhlangabezane namanzi afudumele ngokwanele ukuba akhe isiphepho. Esikhundleni sokuya entshonalanga iye empumalanga. Njengoba sishilo ngaphambili, ukuze isiphepho sakheke, kuthatha kuphela amanzi asezingeni eliphezulu enza inani elikhulu lomphunga wamanzi likwenze kube banzi lokho, ekugcineni, okunxephezelwa phezulu. Yile ndlela amafu esiphepho enza ngayo.
Kwakudingeka iye kuphela kuma-degree angama-45 entshonalanga ukuze iSiphepho uLorenzo sakheke. Kuyiqiniso ukuthi njenge-trajectory engajwayelekile yalokho esikujwayele, kepha ngenkathi kuya enyakatho, isigaba 5 sathathwa. Into ethakazelisa kakhulu ngalesi simo ukuthi ihambe ngendlela engajwayelekile futhi, yize idlule emanzini angavamile ukufudumala, ikwazile ukuthatha amandla anele ukufinyelela isigaba esiphezulu seziphepho.
Lezi yizizathu esenza iSiphepho uLorenzo sibe esinye seziphepho ezidume kakhulu esikhathini sethu. Mayelana nokuzalwa kwesiphepho, siyabona ukuthi kuhlobene nokuguquka kwesimo sezulu, njengoba sishilo phambilini. Kuyiqiniso ukuthi kudingeke ukuthi ithole amanzi afudumele kunokujwayelekile ukuze ikwazi ukufinyelela esigabeni 5, kodwa Kunoma ikuphi, ukuba khona kwalolu hlobo lwesiphepho akukwazi ukuhlobene ngqo nokuguquka kwesimo sezulu. Sidinga izifundo eziningi zokunikezwa kanye namacala afanayo ukuze sikwazi ukuqinisekisa okuthile okufana nalokhu. Kumele kubhekwe ukuthi ukushintsha kwesimo sezulu kunemiphumela yesikhathi eside nokuthi namanje abukho ubufakazi obenele bokukwazi ukuxhumanisa imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu nokwakheka kweSiphepho uLorenzo.
Ingabe kuzophinda kwenzeke?
Ukungabaza kwabantu abaningi ukuthi sizophinde sibone isiphepho salo mkhakha endaweni yethu futhi. I-Meteorology eSpain ichaza ukuthi ngokushintsha kwesimo sezulu sidinga ukuba nezifundo ezahlukahlukene nezinye izinto ezifanayo ukuze sazi ukuthi ngabe kukhona yini uhlobo lwephethini noma kukhona ushintsho ekuziphatheni kweziphepho. Kushiwo ilukuluku ezifundweni futhi lokho, kufanele sibone ukuthi izivunguvungu ezifanayo ziyafika yini eminyakeni ezayo ukuze sikwazi ukukhuluma ngaleli phethini. Ngonyaka odlule saba noLeslie owayenokuziphatha okufanayo noLorenzo. Ngalokhu, i ube nokungabaza ngomthelela wokushintsha kwesimo sezulu kuphethini yokwakheka kwesiphepho.
ISiphepho uLeslie sathinta izwe lethu futhi saba yisiphepho esinamandla kakhulu ukufinyelela iNhlonhlo Yase-Iberia kusukela ngo-1842. Sabuye sabhekwa njengesinye seziphepho zase-Atlantic ezihlala isikhathi eside kakhulu esikhathini. Futhi ibinokuziphatha okuxakile ngokweqile ngoba ibinezinguquko eziqhubekayo emzileni wayo. Lokhu kudale ukuthi ochwepheshe bangakwazi ukuhlela kahle izifundo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngeSiphepho uLornzo nezici zakhona.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho » Isiphepho uLorenzo